SPY385 - OMG Wireless iPhone / Android Phone Charger Hidden Spy Camera - Vahaolana OMG
Fakan-tsary miafina tsy hita: Ny tarika dia manana endrika fisehoan'ny charger finday tsy misy tariby nefa koa fakan-tsary miafina. Ny fitaovana misy tanjona roa dia azo apetraka amin'ny toerana tsy misy mahatsikaritra ny hafa ary mamela anao hitarika rakipeo miafina na fanaraha-maso tsy hita.
Wireless Charger telefaona haingana: Afaho ny tànanao amin'ity charger tsy misy tariby ity amin'ny alàlan'ny filalaovana na famakiana amin'ny telefaonao rehefa mandoa vola nefa tsy mila esorina, afaka mandoa vola amin'ny ankamaroan'ny telefaona finday farany toa ny iPhone8 / 9 / X up, Samsung S7 / S9 up, ary fitaovana maro hafa (Ny finday dia tokony ho tonga miaraka amin'ny laharana fiasa tsy misy tariby).
Fifandraisana finday finday: Rehefa mifandray amin'ny Internet WiFi ianao dia afaka miditra lavitra amin'ny tarika fakantsarinao. Amin'ny fampiasana ny fampiharana fakan-tsary maimaimpoana dia azonao atao ny mijery sy manoratra horonantsary 1080P HD amin'ny alàlan'ny findainao. Io dia ahafahanao miaro sy manara-maso ny fananana na ny zaza / mpitaiza / biby fiompy.
Detection Motion Advanced: Ny cam spy dia manamarika ny fahitana ny fihetsehana sy ny fampandrenesana an-tsaina. Rehefa mihetsika eo amin'ny sehatry ny fahitana ny zavatra na olona iray dia hahazo fampandrenesana eo noho eo ianao amin'ny findainao. Io dia ahafahanao manamarina ireo zava-nitranga ara-potoana tsy misy hatak'andro ary tsy ho diso anjara na oviana na oviana fotoana lehibe ianao.
Fampandraketana & fitehirizana micro SD: Amin'ny alàlan'ny fampiharana dia azonao atao ny mijery sy misintona horonantsary mivantana amin'ny findainao. Azonao atao koa ny mampiditra karatra Micro SD ho an'ny loop na firaketana ara-potoana (karatra SD hatramin'ny 128GB, tsy tafiditra ao). Ity fakan-tsary wifi ity dia mora ampiasaina amin'ny olona rehetra, ampidirina ny torolàlana, omena koa ny fanohanan'ny mpanjifa 24/7.
5 Volt (DC)
13 x 8 x 7 cm; 227 Grams